Aka na-achị steeti ahụ, bụ gọvanọ Willie Obianọ nyere ndụmọdụ a n'ọgbakọ ya na ndị otu jikọtara isi ọchịchị obodo dị iche iche na steeti ahụ, bụ ndị a maara dịka ASATU, bụ nke weere ọnọdụ n'Awka.
N'okwu ya na nzukọ ahụ pụrụ iche, gọvanọ Obianọ, nke onye nọchitere anya ya bụ Kọmishọna steeti na-ahụ maka ahụike, bụ dọkịnta Josephat Akabụike kọwara na ahụike dịka ihe onwunwe kachasị oke ọnụ ahịa na ndụ mmadụ, ma kpọkuo ndị ndu obodo ahụ dị iche iche ka kụziere ndị be ha oke mkpa ọ dị, bụ ịdị ọcha na idebe gburugburu ha ọcha mgbe niile.
Ọ kpọkuru ha ka onye ọbụla kwụsi ịwụnye ahịhịa na unyi n'ọwà mmiri na ebe ndị ọzọ adịghị anya mma, iji wee gbochie ọtụtụ ọrịa na-efe èfè, dịka ọrịa oke na ọrịa ọjọọ ndị ọzọ; ma kwe nkwa na gọọmenti ga-ewepụtakwu ọtụtụ ebe a na-awụfù ahịhịa.
,p>N'ihe gbasaara inweta akwụkwọ ikike e ji atụ akwụkwọ, onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ Obianọ n'ihe gbasaara ọrụ pụrụ iche na inweta akwụkwọ ikike, bụ dọkịnta Oriakụ Amaka Akụdo, jiri ohere ahụ kpọkuo ndị tozuru oke ka ha gaa debanye aha akwụkwọ iji nweta akwụkwọ ikike ha maka nhọpụta ọchịchị ahụ a ga-eme n'ahọ na-abịa abịa.
N'okwu nke ya, onyeisi otu ahụ na-ebu agha megide ịkpọ na ịtụ mgbere ọgwụ ike, bụ ụlọ ọrụ "National Drug Law Enforcement Agency" (NDLEA), bụ maazị Sule Momodu kpọkuru ndị ndu ahụ ka ha nyere ndị ụlọ ọrụ ahụ aka n'igbochi ịkpọ na ịtụ mgbere ọgwụ ike, site n'ịkụziri ha ihe ha kwesiri ịma banyere nke ahụ na ọghọm dị na ya. Otu onye ọzọ, bụ onye na-azụ ahịa ọgwụ, bụ Oriakụ Edith Egbuọnụ kọwaara ndị mmadụ ọghọm dị iche iche ịkpọ ọgwụ ike na-eweta, ma rịọ ha ka ha kụziere ndị ọzọ.
Na nzaghachi n'aha ndị otu ahụ, onyeisi oche ASATU n'ala anyị, bụ maazị Alex Ọnụkwue toro gọvanọ Willie Obianọ n'ihi ihe dị iche iche ọchịchị ya na-eme na mbọ ọ na-agba ime ka steeti ahụ bụrụ eji ama atụ, ma kwe ya nkwa na ndị otu ahụ ga-aga n'ihu inye ha nkwàdo.
A nọzịkwara n'oge ahụ wee jụọ ajụjụ dị iche iche, ọ kachasị n'ihe gbasaara ịdị ọcha, bụkwa nke a nọrọ n'ebe ahụ wee zákpọọ n'ụzọ o doro anya.